April 23, 2021 - ApannPyay Media
အသားညိုသူတွေအတွက် အသားအရေ ကြည်လင်စေမယ့် ပေါင်းတင်နည်း (၅) ခု
April 23, 2021 by ApannPyay Media
အသားညိုသူတွေအတွက် အသားအရေ ကြည်လင်စေမယ့် ပေါင်းတင်နည်း (၅) ခု အသားဖြူသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသားညိုသူပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာ အသားအရေ ကြည်လင် ဝင်းပနေခြင်းဟာ မိတ်ကပ်လိမ်း ပြင်ဆင်ခြယ်သထားခြင်းထက် ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ အသားညိုသူတွေအနေနဲ့ အသားညိုတာကို ဖြူစင်ဝင်းပအောင် ပြုလုပ်ခြင်းထက် အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းက ဆွဲဆောင်မှု ပိုမိုရှိစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အသားညိုသူတွေအတွက် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် မျက်နှာပေါင်းတင်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) နနွင်း၊ ပျားရည်နဲ့ သံပုရာ ပေါင်းတင်နည်း နနွင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ ပျားရည် လက်ဖက်ရည် ၁ ဇွန်းနဲ့ သံပုရာရည် အနည်းငယ်တို့ကို ရောစပ်ထားတဲ့ အနှစ်ကို မျက်နှာအနှံ့ လိမ်းကျံပေးပြီး မိနစ် ၂၀ ခန့်ထားကာ ရေနဲ့ … Read more
အသက်ရှုမှားလောက်အောင် ဆံနွယ်လေးတွေ ပျော့ပြောင်း တောက်ပြောင်စေမဲ့နည်း
အသက်ရှုမှားလောက်အောင် ဆံနွယ်လေးတွေ ပျော့ပြောင်း တောက်ပြောင်စေမဲ့နည်း စာဖတ်သူတွေကို မျှဝေပေးမဲ့ ရိုးရာနည်းလမ်းလေး ကလည်း ဆံနွယ်လေးတွေကို ဝင်းလက်တောက်ပြောင်စေမှာဖြစ်လို့ စာဖတ်သူတွေ နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ပျားရည်နဲ့ သစ်ကြံပိုးခေါက်မှာ အဟာရဓါတ်ပြည့်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင် ဦးရေပြားကို စိုပြေစေတာကြောင့် ဆံနွယ်အဖျားမှာကွဲတာ၊ ဗောက်ထတာ နဲ့ ဆံပင်ကျွတ်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပြုလုပ်ရမဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်း သစ်ကြံပိုးခေါက် အမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း သံလွင်ဆီ ၁/၂ ခွက် ပြုလုပ်နည်း သံလွင်ဆီ ခွက်တစ်ဝက်ကို အိုး(သေးငယ်သောအိုး) ထဲထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ထားပါ။ ဆီ အနည်းငယ်ပူနွေးလာရင် မီးဖိုပေါ်ကချပါ။ ပန်းကန်တစ်လုံးထဲမှာ သံလွင်ဆီကို ထည့်ပြီး၊ သစ်ကြံပိုးခေါက် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း … Read more
အပူကျိတ်၊ အဖု အကျိတ် ၊ ပြည်တည်ကျိတ် ကင်ဆာကျိတ် ရှိသူများအတွက် ဇီဇဝါပန်း
အပူကျိတ်၊ အဖု အကျိတ် ၊ ပြည်တည်ကျိတ် ကင်ဆာကျိတ် ရှိသူများအတွက် ဇီဇဝါပန်း အဖု အကျိတ် အပူကျိတ် ပြည်တည်ကျိတ် ကင်ဆာကျိတ် ရှိသူများ ဇီဇဝါပန်းပင်အရွက်ကို ကြိတ်ပြီး အုံထားပေးပါ အပူများထွက်၍ သိသိသာသာ ပျောက်ကင်းသက်သာကြတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှမဖြစ်ပါ အစေးလောင်ခြင်း ပူခြင်း စပ်ခြင်းလုံးဝမရှိပါ အားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။အဆီကျိတ်ကိုတော့အသုံးမပြုဖူးသေးပါအန္တရာယ်မရှိသောနည်းဖြစ်သဖြင့် အဆီကျိတ်ဝေဒနာရှင်များ စမ်းသပ်စေလိုပါသည်။ စေတနာများစွာဖြင့် အပူက်ိတ္၊ အဖု အက်ိတ္ ၊ ျပည္တည္က်ိတ္ ကင္ဆာက်ိတ္ ရွိသူမ်ားအတြက္ ဇီဇဝါပန္း အဖု အက်ိတ္ အပူက်ိတ္ ျပည္တည္က်ိတ္ ကင္ဆာက်ိတ္ ရွိသူမ်ား ဇီဇဝါပန္းပင္အရြက္ကို ႀကိတ္ၿပီး အုံထားေပးပါ အပူမ်ားထြက္၍ သိသိသာသာ ေပ်ာက္ကင္းသက္သာၾကတာကို ျမင္ရပါလိမ့္မယ္မည္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမွမျဖစ္ပါ အေစးေလာင္ျခင္း ပူျခင္း စပ္ျခင္းလုံးဝမရွိပါ အားလုံးက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။အဆီက်ိတ္ကိုေတာ့အသုံးမျပဳဖူးေသးပါအႏၲရာယ္မရွိေသာနည္းျဖစ္သျဖင့္ … Read more
ပူလွန်းလို့ မနေနိုင်ရင် မီတာခ သက်သာအောင် အဲကွန်းဖွင့်နည်း
ပူလွန်းလို့ မနေနိုင်ရင် မီတာခ သက်သာအောင် အဲကွန်းဖွင့်နည်း စိုး အီလက်ထရောနစ်မှတင်ပြမှုအားကူးယူတင်ပြပါသည် ယခုလိုဗဟုသုတများရှင်းပြပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်မီတာခ သက်သာအောင်အဲယားကွန်းဖွင့်နည်းအဲကွန်း Remote Control ကနေ အပူချိန်ကို အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ ၁၆ သို့မဟုတ် ၁၈ ဒီဂရီလောက် ထားလိုက်ရင် ၂၅ ဒီဂရီမှာ ထားတာထက် ပိုအေးတဲ့လေတွေ ထွက်လာမယ်၊ အခန်းလည်းမြန်မြန် ပိုအေးမယ်လို့ လူအများစုက ထင်ကြပါတယ်။အမှန်က လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲကွန်းက ထွက်လာတဲ့ လေဟာ ကိုယ်ထားထားတဲ့ အပူချိန်နဲ့ မဆိုင်ဘဲ တစ်သမတ်တည်းပါ။ ဒါဟာအဲကွန်းတစ်ခု ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ မသိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။လူအများနားလည်အောင် Technical Terms တွေကို ရှောင်ပြီး အလွယ်ပဲ ပြောလိုက်ပါတော့မယ်။ဒီခေတ်မှာ အသုံးအများဆုံး ဖြစ်တဲ့ Split Type Air Conditioner … Read more
ငွေဝင် ငွေမြဲစေသော ယတြာ။ ခုနှစ်ကြိမ်တိတိ မပျက်မကွက်တိတိကျကျ လုပ်လျှင် ထူးခြားစွာပြောင်းလဲတိုးတက်မည်
ငွေဝင် ငွေမြဲစေသော ယတြာ။ ခုနှစ်ကြိမ်တိတိ မပျက်မကွက်တိတိကျကျ လုပ်လျှင် ထူးခြားစွာပြောင်းလဲတိုးတက်မည် ငွေဝင် ငွေမြဲစေသော ယတြာ။ ခုနှစ်ကြိမ်တိတိ မပျက်မကွက်တိတိကျကျ လုပ်လျှင် ထူးခြားစွာပြောင်းလဲတိုးတက်မည်။ လာဘ်ပိတ်နေတာလား၊ ဈေးရောင်းပါးနေတာလား၊ လက်လွန်ထားသောငွေများပြန်မရတာလား၊ ဈေးရောင်းကောင်းပြီး ငွေမစုမိတာလား၊ အကြွေး များတင်နေတာလား လူတိုင်းဈေးရောင်းကောင်းပြီး အကြွေး ကင်းရှင်းရန် ဘာနေ့သားသမီးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဤယတြာကို တစ်ပတ်တစ်ခါပြုလုပ်ပေးပါ။ တစ်ကြိမ်လုပ်လျှင် တစ်ကြိမ်အကျိုးထူးရပါမည်။ ခုနှစ်ကြိမ်တိတိ မပျက်မကွက်တိတိကျကျ လုပ်လျှင် ထူးခြားစွာပြောင်းလဲတိုးတက်မည်။ ယတြာအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများ-၁-ငွေဖလားတစ်လုံး ၂-မြန်မာ အကြွေစေ့တစ်စေ့ ၃-အဖြူဖယောင်းအကြီးတစ်တိုင် ၄-ဆန်သုံးဆုပ် ၅-ရေခဲရေ ထို ၅မျိုးနဲ့ ယတြာလုပ်လို့ရပါပြီ။ ယတြာနည်း ငွေဖလားထဲမှာ အကြွေစေ့ တစ်စေ့ထဲ့ပါ၊ အကြွေစေ့ပေါ် ဖယောင်းတိုင်အဖြူစိုက်ပါ၊ ဆန် ၃ဆုပ် အသက်အောင့်၍ထဲ့ပါ၊ ရေခဲရေ အပြည့်ထဲ့ပါ၊ (တနင်္လာနေ့ နံနက် … Read more
ခဏခဏ နားကျပ်လေ့ရှိရင် ဖတ်ထားနော်
ခဏခဏ နားကျပ်လေ့ရှိရင် ဖတ်ထားနော် ရေချိုး ပြီး၊ ခေါင်းလျှော်ပြီး နားကြပ် လေ့ရှိပါသလား ကျနော် တို့ ငယ်စဉ်ကတည်းကနားယားလျှင် နားကြပ်တောင် သို့မဟုတ် ဆံပင်ညှပ်ကလစ်လေး‌ တွေနဲ ့နားကြပ်လေ့၊ နားဖာကလော်လေ့ရှိပါတယ်။ နာဖာချေးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့၊ ဖယ်ထုတ်ဖို့ လိုပါသလား နားဖာချေးသည် ဖုန်၊ အမှုန်အမွှားများ၊ ရောဂါပိုးများ နားပြွန်အတွင်းတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမသွားအောင်အကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်။ နားပြွန်အရေးပြားရှိသေးငယ်သောအမျှင်လေးများက ရွေ့လျား‌စနစ်ဖြင့် နားဖာချေးကိုအပြင်သို့ထုတ်ပေးပြီးသဘာဝအလျောက်သန့်ရှင်းပေးနေလို့ နားဖာချေးကိုသန့်ရှင်းပေးဖို့၊ ကလော်ပေးဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ နားကြပ်လို့၊ နားဖာကလှော်လို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးများ နားကြပ်ခြင်း၊ နားဖာကလော်ခြင်း ကြောင့် နားကိုပိုမိုယားယံစေရုံသာမက နားဖာချေးပိုထွက်စေကာ နားဖားချေးပိတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နားပြွန်အတွင်းအသံလှိုင်းမဖြတ်နိုင်တော့ဘဲ နားလေးသွားတတ်ပါတယ်။ ထို ့အပြင်နားကြပ်ခြင်းကြောင့် နားပြွန်နံရံ အရေပြားပွန်းပဲ့ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နားကိုက်ခြင်းများ အပြင် နားပြွန်အတွင်းမှိုစွဲခြင်း၊ နားစည်ရောင်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ခရစ်ဒစ် ခဏခဏ နားက်ပ္ေလ႔ရွိရင္ … Read more
ဗိုက်ချပ်ဖျော်ရည် ပြုလုပ်နည်း ပျား ရည် သံပုရာ ဖော်မြူလာက ဝမ်းဗိုက်သား ကို လျှော ့ချပေးရာမှာ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ပါဝင် ပစ္စည်းများ… သံပုရာသီး ၁၅ လုံး ပျားရည် ဆား အနည်းငယ် ပြုလုပ်နည်း… သံပုရာသီး အခွံကို ဆားနှင့်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ၅ မိနစ်လောက်ကြာလျှင် ရေနှင် ့ဆေးကြောပေးပြီး ရေခြောက်အောင်ထားပါ။ သံပုရာသီးများကို အကွင်းလေးများဖြစ်အောင် ပါးပါးလှီး ပြီး အစေ ့များဖယ်ပစ်ပါ။ ကရားထဲသို့သံပုရာသီး အကွင်းလေး (၁) ကွင်းလျှင် ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်း အချိုးကျ ထည့်ပြီးရေမြုပ်အောင်ထည် ့ပါ။ အဖုံး ဖုံးပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီး… ၃-ရက် … Read more
ကြောင်လျှာရွက်၊ ကြောင်လျှာခေါက်၊ ကြောင်လျှာ သီး တို့၏ ဆေးဖက်ဝင်အသုံး
ကြောင်လျှာရွက်၊ ကြောင်လျှာခေါက်၊ ကြောင်လျှာ သီး တို့၏ ဆေးဖက်ဝင်အသုံး ကြောင်လျှာပင် (Indian Trumpet Flower , Raw Material , Oroxylum indicun Vent , Bignoniaceae)။ မြန်မာ့တိုင်ရင်းဆေးပညာ အသစ် တဖန် ပြန်လည် ထွန်းကားပါစေသော်။ ကြောင်လေးပင် မြွေနှင့် အဆိပ်မျိုးမျိုး နိုင်နင်းသော ဆေး ဖော်စပ်ရာ၌ အသုံးပြု ကြောင်တစ်ကောင်ခေါ်သည့်ကြောင်လျှာရွက် (က) ကြောင်လျှာ အခေါက်အမှုန့်ပြု ၍ ချင်း(ဂျင်း)ရည် ၊ ပျားရည်တို့နှင့် ရောစပ်လျက် သောက်သော် ပန်းနာ ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်၏ (ခ) အခေါက်မှုန့်ကို ရေနွေးတွင် ၂ နာရီခန့်စိမ်၍ စစ်ပြီး နံနက် ည သောက်သော် အစာမကြေရောဂါ ပျောက်၏ … Read more
ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတောင့်တင်းပြီး ဇက်ကြောတက်နေရင် .
April 23, 2021 April 23, 2021 by ApannPyay Media
ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတောင့်တင်းပြီး ဇက်ကြောတက်နေရင် . “ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတောင့်တင်းပြီးဇက်ကြောတက်နေပါသလား မပူပါနဲ့မိတ်ဆွေ ” ရုံးကပြန်လာတိုင်း အမြဲတမ်းကိုယ်လက်တွေကိုက်ခဲတောင့်တင်းပြီးဇက်ကြောတွေတက်လှသည်ဟုဆိုကာ နင်းပါဦး နှိပ်ပါဦး မိသားစု၀င်များအားအကူအညီတောင်းခံတက်သော ဖခင်အားကြည့်ပြီး ဂရုဏာသက်မိသည်။ ထိုမျှမက ဇက်ကြောကို ထင်းချောင်းဖြင့်ထုခိုင်း၊ သနပ်ခါးတုံးဖြင့်ထုခိုင်းစေခိုင်းတတ်ပြန်သည်။ထိုကာလသည်က(၆)နှစ် မကပင်ကြာမည်ထင်ပါသည်။ ယခုမဖြစ်တော့ပါ ။ နည်းလမ်းကောင်းလေးရလိုက်ပါသည် ။ ” နည်းလမ်း ” နေ့စဉ်အုန်းမှုတ်ခွက်နင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ရုံးကပြန်လာသည်နှင့် ရေမိုးချိုးသည်။ ပြီးနောက် အိမ်နီးနားရှိ သက်ရင်းကြီးပင်မှ သက်ရင်းကြီးရွက်(၂)ရွက်ကိုခူးကာ အုန်းမှုတ်ခွက်ပေါ်တင်လိုက်ပြီး ခြေဖဝါးပြင်နှစ်ဖက် နေရာအနှံ့ မုန်ညှင်းဆီကိုလူးတော့သည်။ ထိုနောက် မုန်ညှင်းဆီလိမ်းထားသောခြေဖဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့် သက်ရင်းကြီးရွက် အသင့်တင်ထားသော အုန်းမှုတ်ခွက်ပေါ်သို့ (၁၅)မိနစ်ခန့် စိတ်တိုင်းကြနင်းခြင်းဖြစ်လေသည်။ အဖေနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားရခက်သောကိုယ်လက်တောင့် တင်းဇက်ကြောတက်ခြင်း အမှန်ပင် ယနေ့ချိန်ထိ ပျောက်ကင်းသွားလေသည်။ လိုသူတို့သုံးစေတနာအပြုံးဖြင့် ရွှင်လန်းနိုင်ပါစေ… ရဲမျိုသူ ( ဗောဓိမြိုင် ) မှတ်ချက် … Read more
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းကနေ ဖျက်ပစ်လိုက်သင့်တဲ့ အန္တာရာယ်များတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်း ( ၈ ) ခု